Ikhamera ye-HD efihliweyo yokuHlola iKhamera yeHD, ukuHamba okuPhathwayo kunye noMbono wasebusuku (SPY152) | Izisombululo ze-OMG
I-OMG Mini efihliweyo yeKhamera yokuHlola, i-HD 1080P yokuDibanisa eVumayo kunye noMbono woBusuku (SPY152)
Iilensi zinokujikelezwa zii-degrees ezingama-180. Isisombululo sevidiyo siphezulu ukuya kwi-1080P, similisela i-1 yezigidi zeengcaciso eziphezulu zeelensi. Ingakuxelela ngokucacileyo ukuba kuqhubeka ntoni.
Ngama-4 ii-pcs ze-LED emnyama ezingabonakaliyo kunye nesicekeceke (i-LED ayikhanyisi ekusebenziseni) kunye noludwe olubonakalayo ebusuku olufikelela kwiimitha ezili-12, yikhamera efanelekileyo yokhuseleko ekhaya.
Ubude bexesha elide lokurekhoda: Ibhetri ye-lithium eyakhelweyo eyi-1200 m, ukurekhodwa kwevidiyo okuma kwi-8 iiyure.
I-140 degrees wide angle
Ixhasa iividiyo ezihambahamba
Uncedisa ixesha kunye neetampamphu zokuhlala
Incedisa ukufunyanwa kwesantya: Xa kuhamba ukuhamba, ikhamera iya kuqala ukurekhoda ngokuzenzekelayo.
Iimveliso zethu zisetyenziselwa mI-onitor kwaye ikhusele izinto zangaphakathi ezinje ngamagumbi okulala, amagumbi, iintsapho, iilenesi, iigaraji, izindlu zondwendwe, kunye nokunye ukuqinisekisa ukuba abalupheleyo, i-nanny okanye ezinye izalamane zikhuselekile kwaye zisempilweni. Ikwakhusela ikhaya lakho kubanxaxhi.
Ifomathi yevidiyo: AVI
Isixazululo sevidiyo: 1920x1080P 25-30fps
Ifomathi ecinezelekileyo: M-JPEG
Uxhasa uMax. Amandla: 32GB
Ixhasa inkqubo: XP / Vista32 / WIN7 / WIN8 / WIN10, Mac OS
Ixesha lokuhlawula ibhetri: iiyure ze-5
Ayikuxhasi ukuthatha imifanekiso, ukurekhodwa kwevidiyo kuphela
Ixesha lokurekhoda ikhadi le-SD: I-8G: imizuzu eli-100 16G: imizuzu engama-200 imizuzu engama-32G: imizuzu engama-400
Ixesha lokugcina lokugqibela: Iiyure ze-8 (Umbono ebusuku ubonakala: iiyure ze-5)
8778 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-1 Namhlanje